RAJOELINA ANDRY NIRINA : Hanokatra ny TIKO sy ny MAGRO no mahamaika an-dRavalomanana
Omaly hariva taorian’ ny fanombohana tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana ny fampielezan-kevitra tany amin’ny ivon’i Madagasikara any Itasy dia nanohy ny fifampiresahany tamin’ny vahoaka teto amin’ny manodidina ny Renivohitra ny kandidà Rajoelina Andry Nirina. 5 décembre 2018
Anisan’ireny ny teny Tanjombato omaly hariva izay niresahany mivantana tamin’ny vahokan’ Atsimondrano ka tamin’io no nilazany ny tsiahin’ny tolona teny amin’ny kianjan’ny 13 mey tamin’ny volana avrily lasa teo niarahan’ny Depiote 73. Tamin’izay, hoy izy dia nitondra sora-baventy hoe « Alao hisy ny fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika ».
Fa ny sora-baventy nentin’ny depiote mpiara-dia tamin’ izany fotoana izany kosa dia ny hoe « Sokafy ny Tiko, sokafy ny Magro ». Izany hoe, ny hijery ny fiainany manokana, hijery ny orinasany, hanao izay hampanan-karena azy no mahamaika ilay mpifaninana amiko fa tsy ny fiainan’ny Malagasy iray manontolo.
Omaly ihany koa no mbola nanambarany indray fa « vintana farany » ho amin’ny fampandrosoana an’i Mada-gasikara ny filatsahany hofidina. Raha izy no lany, izy no ho filoham-pirenena afrikanina tanora indrindra, izy no ho filoha zandriny indrindra aty amin’ny Ranomasimbe indianina. Nentaniny araka izany ny mponin’ Atsimondrano mba hahay hisafidy satria tiana handroso haingana i Gasikara. Ampio aho hanampiako anao, hoy indray izy.
Notisahiviny nandritra ity resany omaly ity koa fa raha teo amin’ny fitondrana ny mpifaninana aminy dia nanototra an’Andohatapenaka ary nikasa hanao izany ho an’ny orinasany. Rehefa tonga teo min’ny fitondrana kosa izy Rajoelina nandritra ny Tetezamita dia nanangana Hopitaly ho an’ny vahoaka malagasy tamin’izany toerana izany fa tsy nanangana orinasa ho an’ny tenany manokana teo amin’ilay toerana. Izany no nilazany fa dia filoha tia tanindrazana sy tia ny mpiara-belona aminy no ilain’i Madagasikara fa tsy filoha hijery ny tombontsoany manokana ».
Afaka 15 andro dia hametraka tantara ary hanova ny tantara isika, hoy izy ka nafarany fa aleontsika ao anatin’izay 15 andro izay manao ezaka faran’izay azo atao manentana ny mpiara-belona, ny mpiray vodirindrina mba hifidy ny laharana faha-13 satria eo amin’ny kihon-dalan’ny tantara i Madagasikara, mila misafidy ny handroso isika, hoy indray izy. Ny volana desambra dia volana nahatongavan’ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy koa ity no volana hiovan’ny tantaran’i Madagasikara. Izay indrindra no antony nanombohana ny fampielezan-kevitra tany amin’ny ivon’i Madagasikara hoy hatrany ny kandida faha-13. Ankino am-bavaka izany, mivavaha ho a n’i kandidà faha-13 handresentsika fa tsy maintsy tafita Madagasikara, hoy izy namarana ny teniny.